Jamaica na-anabata ụgbọ elu ọhụrụ si German Airline Eurowings
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Jamaica na-anabata ụgbọ elu ọhụrụ si German Airline Eurowings
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ejiri ọkọlọtọ Jamaica chọọ ya mma, ụgbọ elu nke atọ kachasị na Europe bụ Eurowings, na-ebu ụgbọ elu mbụ ya na Frankfurt, Germany, gaa Montego Bay na St. James. Ụgbọ elu ahụ rutere na mgbede Nọvemba 3, 2021, ya na ndị njem na ndị ọrụ ụgbọ mmiri 211.
Ụgbọ elu nke atọ kachasị na Europe, Eurowings, mere ụgbọ elu mbụ ya na Frankfurt, Germany, gaa Montego Bay na St. James na mgbede ụnyaahụ.
Germany abụrụla nnukwu ahịa maka Jamaica, yana ndị ọbịa 23,000 na 2019 tupu ọrịa a.
Nke a ga-enyekwara aka na ozi Jamaica ịbawanye ndị ọbịa si Europe, gosipụtara site na ikike oche ụgbọ elu dị n'etiti UK na Jamaica ugbu a na 100% nke ihe ọ bụ tupu COVID.
Jamaica mepere maka azụmaahịa ma bụrụ ebe nchekwa na ọnụọgụ ọrịa COVID dị nso na efu na Resilient Corridor.
Njem nleta Jamaica Minista, Hon. Edmund Bartlett, bụ́ onye akụkọ banyere ụzọ ọzọ a sitere na Germany nwere aṅụrị, kwuru na ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ ga-ewusi njikọ nke àgwàetiti ahụ na ahịa Europe ike.
"Jamaica nwere nnọọ obi ụtọ ịnabata ụgbọ elu mbụ si Eurowings na mgbede ụnyahụ. Germany abụrụla anyị ahịa siri ike, ebe ndị ọbịa 23,000 si obodo ha na-abịa n'ikpere mmiri anyị na 2019 tupu ọrịa a. Amaara m na ọnụ ọgụgụ a ga-abawanye site na ụgbọ elu anaghị akwụsị akwụsị ugbu a sitere na Eurowings na Condor, "Bartlett kwuru.
"Ụgbọ elu ụgbọ elu a si Germany ga-enyekwa aka n'ozi anyị ịbawanye ndị ọbịa si Europe, nke ndị otu m na-arụsi ọrụ ike. N'ezie, ikike oche ụgbọ elu dị n'etiti UK na Jamaica dị 100% nke ihe ọ bụ tupu COVID. Anyị chọrọ ime ka obi sie ndị mmekọ anyị na ndị ọbịa ga-abịa n'àgwàetiti ahụ ike Jamaica mepere emepe maka azụmahịa ma bụrụ ebe nchekwa na ọnụọgụ ọrịa COVID na-eru nso efu na Resilient Corridor, "Ọ gbakwụnyere.
Ụgbọ elu Eurowings Discover, nke nwere ndị njem na ndị ọrụ ụgbọ mmiri 211, ka e ji ekele ike mmiri na ọdụ ụgbọ elu Sangster International Airport (SIA) mgbe ọ bịarutere.
Ndị njem ahụ nabatara osote onye isi obodo Montego Bay, Councillor Richard Vernon; Onye nnọchi anya German na Jamaica, Onye isi ala Dr. Stefan Keil; Onye isi oche nke Jamaica Vacations Ltd. Joy Roberts; na onye isi mpaghara na Jamaica Tourist Board, Odette Dyer.
Ọrụ ọhụrụ a ga-efe efe ugboro abụọ kwa izu na Montego Bay, na-apụ na Wednesde na Satọde, wee kwalite ịbanye n'àgwàetiti ahụ site na Europe. Ọ dị mkpa ịkọwapụta na Jamaica na-ele anya ịnweta ụgbọ elu 17 anaghị akwụsị akwụsị kwa izu na United Kingdom. Na mgbakwunye, ụgbọ elu njem ntụrụndụ Switzerland, Edelweiss, malitere ụgbọ elu ọhụrụ na-eme kwa izu na Jamaica ebe Condor ụgbọ elu maliteghachiri ụgbọ elu ugboro abụọ kwa izu n'etiti Frankfurt, Germany na Montego Bay na Julaị.
Eurowings bụ ụgbọ elu dị ọnụ ala nke Lufthansa Group yana, dịka otu a, akụkụ nke otu ụgbọ elu kachasị n'ụwa. Ha na-arụ ụgbọ elu nke ụgbọ elu 139 ma bụrụ ọkachamara na ụgbọ elu dị ọnụ ala na-aga n'ihu na Europe.